Omama abayintsha nokuncelisa | La Leche League SA
OMAMA ABAYINTSHA NOKUNCELISA
Njengomama osengomusha, ungahle uzibuze ukuthi uzokwazi yini ukuncelisa ingane ibele futhi uphindele esikoleni. Ukuncelisa ibele kulula, kuyindlela emnandi yokuba wena nengane yakho nazane kangcono. Noma yikuphi ukuncelisa ibele kungcono kunokungancelisi nhlobo.
UKUNCELISA IBELE KUBALULEKILE KOMAMA ABAYINTSHA
Ukuba ngumama kungaba wumsebenzi omkhulu – ukuncelisa kuwenza ube lula futhi kushibhile.
Izingane ezincelayo azivamanga ukugula – azikhathazi, sincane isikhathi osichitha uya emtholampilo noma ulova esikoleni noma ungababoni abangane.
Ukuncelisa kukwenza kube lula ukuba wazane nengane yakho futhi kuyakuqinisekisa njengomama.
Ukuncelisa kwanele: ungakwenza noma nini, noma kuphi futhi ubisi lwakho luhlala lusezingeni elifanele lokufudumala.
Ukuya esikhathini nakho kuyaqhela njengoba uncelisa ibele kaningi, futhi nomzimba ukhehla ngokwemvelo.
UMUSHA EKUNCELISENI IBELE
Ungahle ungaqiniseki ukuthi uhlela kuncelisa isikhathi esingakanani. Zama izinsuku noma amaviki ambalwa.
Ukuncelisa ngeke kubangele amabele akho ukuba alenge – amabele akho kuzomelwe ukuba aseshintshile kakade ngokwakheka nobukhulu ngesikhathi sokukhulelwa.
Khuluma nomngane noma othile omethembayo oyincelise ngempumelelo ingane yakhe.
Ukuncelisa akumelwe kube buhlungu – cela usizo uma ukuncelisa kunzima noma kubuhlungu. Ukuncelisa lapho usendaweni enethezekile futhi uyifake ngokuphelele ingono emlonyeni kunganqanda izingono ezibuhlungu.
Njengoba ingane yakho incela kaningi, yilapho nawe uzokhiqiza ubisi oluningi. Vumela ingane yakho incele kaningi ngokuthanda kwayo futhi uzame ukuzinika isikhathi esanele sokwazi usana lwakho.
Uma unquma ukuphindela esikoleni, zama ukulinda kuze kube yilapho ingane ingasese wusana. Ingane yakho izowujwayela umjikelezo othile ozokwenzeka futhi lokho kuzokwenza kube lula ukuhlela usuku lwakho.
Uma ukhetha ukuqhubeka nokuncelisa lapho usuphindele esikoleni, ungakhama ubisi lwakho bese ulishiye nalowo onakekela ingane. Ungaqala ngokwenza lokhu amaviki ambalwa ngaphambi kokuphindela esikoleni.
Hlela ukuchitha isikhathi nengane yakho uma kuphuma isikole, uzinike nesikhathi sokutadisha nesokuba nabangane.
Ukuba nengane nokuya esikoleni kuzoba lula ngokuhamba kwesikhathi.
Omama abaningi abayintsha balahlekelwa ngabanye babangane babo lapho ingane ifika, kodwa futhi benza abanye abangane endleleni. Hlangana nabanye omama noma abangane abazokweseka.